Iyo iPhone 7 inounza masipika mune stereo modhi uye isu tinokuudza iwe pavhidhiyo | IPhone nhau
IPhone 7 maspika stereo: ane simba, asi haagutsikane [vhidhiyo]
Zvakafanana nekunze, nyowani mukati. Tsananguro yatinogona kuisa kune iyo iPhone 7 pamwe nekune mutauri kusvika parizvino inoshandiswa kune mafoni atinowana pane yekumusoro chikamu kumberi kwechigadzirwa. Mune ino modhi, uye kekutanga pane iPhone, tinoona inosanganisa iyo stereo modhi yekuburitsa ruzha, kusanganisa mutauri ataurwa pamusoro neyakajairika iri pazasi peiyo terminal.
Saka inosanganisa sarudzo iyo inobatsira chaizvo muzviitiko zvezuva nezuva, kupa zviri nani kuteerera uye pamusoro pazvo zvese, simba rakawanda. Kuwedzera kwehuwandu ndiko kwakanyanya kumira kubva pakuwedzera uku, kwete pamwe nehunhu hunoguma hwahwo hwaanotipa. Kunyanya, zvinonzwika zvine ruzha, zvine ruzha chaizvo.
Dzorera mumitunhu mipfupi
Ngatizvitarisei, hazvina kushata kekutanga stereo yakaverengerwa muiyo iPhone, asi mhedzisiro yacho inogona kuve iri nani. Kure nekuva yakajeka uye yakachena ruzha, iyo tsika yakanangana nesimbi toni ndiyo yatinogona kunzwa kazhinji yenguva kuti isu tinoisa vhoriyamu kune iyo yepamusoro. Zvakadaro, mhedzisiro yacho inokwana kune vazhinji vashandisi. Mushure mezvose, smartphone haina kugadzirirwa kuve XNUMX% yakavimbika odhiyo odhiyo.
Chinhu chinofanira kutarisisa icho chakagadziriswa nekusasandurwa kwedhijitari mumitsara yakajairika yechigadzirwa ndechekuti, Nepo ruzha kubva kumutauri wepamberi ruchazouya kwatiri kubva kumberi, iyo ichibva pasi ichave yakanangiswa zvakanyanya munzira iyo mudziyo uripo panguva iyoyo. Izvi zvinogadzira mhando ye "unonzwika kuremara" kana ruzha rwuchitambirwa nehukuru hwakasiyana kubva kune mumwe uye mumwe mutauri. Zvekare, hazvizogara zvichioneka (zviri nyore kukoshesa nemudziyo yakatwasuka) uye haisi dambudziko rakanyanya kana zvikaitika, asi zviripo.
Kunyangwe izvi, kutamba neumwe mutauri kwakadonha zvishoma mune mamwe mamiriro uye zvaitove zvisina kugadzikana kubata iyo iPhone zvekuti mutauri wepazasi wakavharwa zvishoma, zvakashata zvinokonzeresa kubuda kwezwi. Iyo iPhone 7 haizorangarirwi nekuve iyo smartphone ine yakanyanya stereo ruzha pamusika, asi ibasa rakawedzerwa iro raidikanwa kuti uone mariri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 maspika stereo: ane simba, asi haagutsikane [vhidhiyo]
Ini ndinobvumirana zvachose newe, hazvisi izvo zvakanyanya asi hazvisi izvo zvakanyanya
Podcast 8 × 05: Nhau kubva kuGoogle neApple
Vashandisi vanogunun'una kuti yavo nyowani iPhone 7 inouya neActionivation Lock